အောင်ဆုမွန် (မိုဘိုင်း): Android ဖုန်းများတွင် တရုတ်ဖောင့်မပျောက်အောင်မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်း
Android ဖုန်းများတွင် တရုတ်ဖောင့်မပျောက်အောင်မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်း
အခုပြောပြပေးမှာကတော့ root လုပ်ထားတဲ့ Android ဖုန်းအားလုံးမှာ မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းကို သုံးလျှင် မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် ၊ တရုတ် သုံးမျိုးကို မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်သော root explore နှင့် droidsanfallback.ttf ကို အောက်တွင်ဒေါင်းပါ။
၁။ root explore ကို install လုပ်လိုက်ပါ။
၂။ download ဆွဲထားသော Droidsansfallback.ttf ကို sd card ထဲ ထည့်ထားပါ။
၃။ root explore ကို run လိုက်ပါ။ super user permission ပေးလိုက်ပါ
၄။ sd card ထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ Droidsansfallback.ttf ကို ၃ စက္ကန့်လောက် ဖိနှိပ်ပြီး copy ကို ရွေးလိုက်ပါ
၅။ system/fonts ကို ရောက်လျှင်ညာဘက် အပေါ်ဒေါင့်က Mount R/W ကို နှိပ်ပြီး Mount R/O ဖြစ်အောင်ပြောင်းပါ။ (ပြောင်းလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ Busy Box ကို install လုပ်ပါ။)
ပြီးလျှင် paste လုပ်လိုက်ပါ။ overwrite လုပ်မလားလို့မေးရင် Yes ကိုရွေးလိုက်ပါ။
၆။ paste လုပ်လိုက်သော droidsanfallback.ttf ကို ၃ စက္ကန့်လောက် ဖိနှိပ်ပါပြီး permissions ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
၇။ permissions ကို rw-r-r ဖြစ်အောင် အောက်က ပုံအတိုင်း အမှန်ခြစ်ပေးပါ။
၈။ အခုဆိုရင်တော့ Android ဖုန်းတွေမှာ တရုတ်ဖောင့် မပျက်အောင် မြန်မာဖောင့် ထည့်လို့ ပြီးပါပြီ။
Root မလုပ်ပဲ Frozen keyboard ကို Factory reset ချတောင် မပျက်အောင် ထည့်နည်း
အခု ပြောပြမှာကတော့ root လုပ်ထားထား မထားထား CWM recovery တင်ထားရုံနဲ့ Frozen keyboard ကို factory reset ချတောင် မပျောက်အောင် ထည့်နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ zip ဖိုင်လေး လုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Android ဖုန်းကို ကျွမ်းကျင်စွာ မသုံးတတ်သေးသည့် User တွေမှာ ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထရှိသည့် Frozen keyboard ကို မှား၍ ဖျက်မိခြင်း ၊
factory reset ချလိုက်၍ keyboard ပျက်သွားခြင်းကြောင့် ဆိုင်ပြန်ပြေးရခြင်း၊ အဲဒီအခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းရန် ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ DOWNLOAD
၁။ CWM သွင်းရမည်။
Android ဖုန်းတွေအတွက် CWM ၀င်နည်းကတော့ ဖုန်းတစ်ခုနဲ့ တစ်ခု မတူပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ ရှင်းမပြတော့ပါဘူး။
CWM ထည့်ပြီးပြီဆိုရင် တော့ ဖုန်းကို သက်ဆိုင်ရာ ခလုပ်များကို ပြိုင်တူနှိပ်၍ CWM recovery mode သို့ဝင်ပါ။ (အတိအကျမပြောရခြင်းမှာ ဖုန်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ recovery mode ၀င်နည်းမတူခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည်။)
ပြီးလျှင် install zip from sdcard > choose zip from sdcard > FrozenKeyboardByHtayHlaingOo.zip ကို update လုပ်ပါ။
main menu သို့ ပြန်သွား၍ reboot system now ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ဖုန်း Reboot ပြန်တက်လာတဲ့ အခါ မြန်မာစာကို ရေးနိုင်တဲ့ Frozen keyboard ကို factory reset ချတောင်မပျောက်ပဲ ဖုန်းထဲမှာရှိနေပါလိမ့်မယ်။
မှတ်ချက်။ ။ mr.android ဆိုဒ်မှကူးယူတင်ပြထားပါသည်။ Posted by
Aung Su Mon (Mobile)
Written on 8:11 PM by Aung Su Mon (Mobile)
မှတ်ချက်။ ။ mr.android ဆိုဒ်မှကူးယူတင်ပြထားပါသည်။ Posted in Android သမားများအတွက်
Rangoon Time Music Radio
A5,"Myat" Shopping Center, Taunggyi.
Computer softwares လေးများ
TinyUmbrella For iOS 6.1
iOS 6.1 ထွက်ပြီ...
iOS 6.1 ကို Jailbreak လုပ်နိုင်ရန် သတိပြုရမည့် အချ...
Huawei တွေအတွက် နောက်ဆုံးထွက် Firmware လေးတွေပါ
iOS 6.1 အတွက် Untether Jailbreak အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ.....
Chatting သမားများအတွက် Say Hi for android....
Android ဖုန်းများတွင် တရုတ်ဖောင့်မပျောက်အောင်မြန်မ...
Computer ပေါ်မှာ apk ဖိုင် logo ဖော်မယ်
Laptop နှင့် Notebook ကွာခြားချက်
Icon တစ်ခု အလွယ်တကူ ဖန်တီးခြင်း
နူတ်ဆက်ဖို့ အချိန်တန်ခဲ့တဲ့ Nokia ရဲ့ နောက်ဆုံး Sy...
Android OS အသုံးပြုတဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် လျှ...
လူ့ဦးနှောက်သည် Google Data Center တစ်ခု တောင် မလံ...
Version အကြောင်း တစ်စေ့ တစ်စောင်း သိကောင်းစရာများ
ခဏခဏမေ့တတ်တဲ့သူတွေအတွက် လေချွန်ပီးဖုန်းရှာတဲ့ ဆောစ...
Android Phone တစ်လုံးတွင် ထည့်သုံးသင့်သည့် Applica...
iPad Mini ကိုပြိုင်မည့် Samsung Tablet
မကြာခင် တောက်ပလာတော့မယ့် Jailbreak ၏ အနာဂါတ်
iPhone Unlock လုပ်ခြင်းသည် ဥပဒေနှင့် ငြိစွန်းမည်
iPh 5s က မတ်လ ပထမပတ် မှာ Pre Order စတင်လက်ခံ
How To Repair Memory Card (Memory Card တွေကို Cump...
Internet Download Manager ( Portable) v 6.11
Wondershare Mobile Go v3.0.1
iTools 2012 Beta 1107E For Windows
Android Mobile Phone Drivers ( Collection)
Youtube ပေါ်မှ Video File များကို အလွယ်ကူဆုံးယူနည်း...
Basic Knowledge of Traceroute (ကွန်ပျူတာသမားများအတ...
"Do Not Disturb" feature of iOS 6
iPad MiNi အကြောင်းလေးပါ။
iPad ချစ်သူများအတွက် မျောက်မြီး
Apple က Cellular iPad mini နှင့် iPad4တရုပ်တွင် ...
Apple မှ Samsung နှင့် A6X processor ထုတ်လုပ်မှုကို...
iOS 6.0.2 ကို iPhone5တွင် Jailbreak လုပ်နိုင်ပြီ...
Mobile Alarm System v1.2.3 for Android
Huawei ဖုန်းများ အတွက် Flashing Tool
Zapya v1.6 အသစ်လေးပါ။
All-In-One Toolbox(17 Tools) for android..
Phone SD Card Repair
SONY UNLOCKING THE BOOTLOADER TOOL
Samsung Galaxy Note-10.1 N8000 ကို Official Jellyb...
Sony Company ရဲ့ အသစ်ထွက်…နာမည်ကျော် Xperia Z Them...
S III [i9305]ကို Official JB(v4.1.2) တင်ပြီး Root ...
မြန်မာ GSM ဖုန်းများ ပြည်ပသယ်ဆောင်ခွင့် ရလျှင် နို...
iPhone သုံးသူများ facebook messenger ကနေ အခမဲ့ ဖုန...
Phone အသုံးပြုသူများအတွက် Citizen နာရီ
Apple တို့ iPhone5အတွက် ကုန်ကြမ်းမှာယူမှု လျော့ခ...
စမတ်ဖုန်းကို Tablet နှင့် ပူးထားရုံဖြင့် အားဖြည့်န...
Android 2.3 တွေမှာ မျက်နှာနဲ့ Lock ချမယ်
Huawei ဖုန်း အကြောင်း သိကောင်းစရာ
Tizen စက်လည်ပတ်မှု အသုံးပြု စမတ်ဖုန်းများကို Samsu...
How to bypass Android Pattern Lockscreen (Pattern ...
Samsung Galaxy S3 ဖုန်းရောင်းချမှု ၅ လအတွင်းအလုံးေ...
iPad mini ကို ယှဉ်ပြိုင်မည့် Windows Tablet ကို HT...
ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း လိုင်စင် ၂ ခု တင်ဒါ...
Phone ရဲ့ internet Speed ကို မြင့်မယ်
မိုဘိုင်းအင်တာနက် သုံးစွဲခ စနစ်နှစ်မျိုးဖြင့် ကောက...
Mobile Reviews: Huawei Ascend W1
ဆော့ဝဲနှင့်ဂိမ်းတွေကို Root မလိုပဲနဲ့ ရွှေ့ ကြမယ်
မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုသူများ သတိပြုရန် ( အရေးကြီး...
Samsung ရဲ့ Micro SD card လေးတွေပါ
Sony Xperia J ကို Root ပြုလုပ်ချင်သူတွေ အတွက် Root...
ဓာတ်ပုံကနေ ပန်းချီအဖြစ်ပြောင်းမယ့် Apk 1.4MB
iOS 6.0.1,6.0.2 untetherd Jailbreak မကြာမီလာမည်
လူငါးသောင်းခန့် အလုပ်အကိုင် ပေးနိုင်မည့် ကိုရီးယား...
Android Device များပေါ်တွင် Ubuntu OS ကို ထည့်သွင်း...
သယ်ယူသွားလာ၍ လွယ်ကူသော အားဖြည့်စက် Apple ကထုတ်မည်
Tablet Review: Surface
Channel7for android
Air Control For Android Game
Game Booster For Android
Angry Birds Space HD v1.4.0 For Android
ဆိုင်ကယ်ပြိုင်ဂိမ်းအလန်း For Android 11MB
Galaxy Note2Live Wallpaper လေးပါ။
HTC မိုဘိုင်းဖုန်း၏ တရားဝင်အရောင်းစင်တာနှင့် ဆားဗစ...
Y-Talk ကို အင်တာနက်လိုင်း မလိုဘဲ အသုံးပြုနည်း
မြန်မာစာစနစ် ပါဝင်သည့် HTC မိုဘိုင်းဖုန်းများအားြ...
iPhone5နဲ့ Samsung Galaxy S3 ဘယ်ပာာပိုအကြမ်းခံလဲ...
မိမိ သုံးနေတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးသာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးေ...
4G LTE ထောက်ပံ့ပေးထားသော နောက်ဆုံးပေါ် စမတ်ဖုန်းမျာ...
ကွေးညွန့်နိုင်သော ၅.၅ လက်မ စမတ်ဖုန်းကို Samsung မှ...
Apple iOS ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းလေးပါ
Android OS ရဲ့သမိုင်းကြောင်းလေးပါ
Nokia ဖုန်းရဲ့ Secret Code များ
Android Vs iOS (သင်ဘာကိုရွေးမလဲ)
ပထမဆုံး iPhone ကို ၁၉၈၃ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ထုတ်လုပ်ခ...
GSM Internet Setting ထည့်နည်း (for Android)
Android ဖုန်းပျောက်ပါက ဖုန်းအားထိန်းချုပ်နိုင်သည့်...
နာမည်ကျော် မိုဘိုင်းဖုန်းကုမ္ပဏီဖြစ်သော HTC ဖုန်းကု...
မျက်နှာပြင် နှစ်ဖက်ပါသော စမတ်ဖုန်း ရုရှားက ထုတ်မည်...
iPhone6သို့မဟုတ် iPhone 5S ဇွန်လတွင်ထွက်မည်
6.3 လက်မ ပါဝင်သည့် Galaxy Note3ကို Samsung ထုတ်လ...
အပါးလွှာဆုံး ဖြစ်လာမယ့် Ipad 5
ကြီးမားနေတဲ့ Screen နဲ့ ထွက်ရှိလာမယ့် HTC စမတ်ဖုန်...
Samsung Galaxy S III Mini မိတ်ဆက်ပြသ
ပါးလွှာပေါ့ပါးပြီး Retina display ပါဝင်သော iPad Min...
Samsung Galaxy S4 မေလနောက်ပိုင်းထွက်မည်
Iphone5ကိုယှဉ်ပြိုင်မည့် Xphone ကို Motorola မှထ...
Mobile Reviews: LG Optimus VU II
Panasonic ကလည်း P-02E HD resolution ဖုန်းထုတ်ပြီ
ဈေးသက်သာသော စမတ်ဖုန်း Apple ထုတ်လုပ်မည်မဟုတ်
Samsung မှထပ်မံဖြန့်ချိတော့မည့် Samsung Galaxy S I...
Samsung Galaxy Grand ဖုန်းကို Samsung ပြသ
Lenovo ၏ screen အရွယ် ၂၇ လက်မရှိ Horizon table ကွန...
မြန်မာငွေသိန်း ၂၀ တန် Black Berry Porsche Design
smart Phones များအတွက် Sailfish OS အသစ်
ASM ( Mobile ) .apk ယူရန်
ASM ( Visitors )
About You ! ! !
Android အခြေခံ မိုဘိုင်းဖုန်း OS အသစ်ကို Facebook မိတ်ဆက်ဖွယ်ရှိ
Facebook သည် ယခုအခါ ကိုယ်ပိုင် အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် စမတ်ဖုန်း OS အမျိုးအစားသစ်တစ်ခု ထုတ်လုပ်ရန် အသင့်ရှိနေပြီဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာပြန်သည်။ ...
Online ကနေ MRTV-4 တိုက်ရိုက်ကြည့်ရန်။
MRTV-4 ရုပ်သံလိုင်းကို Internet မှကြည့်ချင်သူများအတွက်ပါ။ MRTV-4 ကြည့်ရန် Huawei ဖုန်း အကြောင်း သိကောင်းစရာ
လက်ကိုင်ဖုန်း hand set အမျိုးအစားတွေထဲမှာ HUAWEI ဖုန်းအမျိုး အစားက ရောင်းအားကောင်းပါတယ်။လိုင်းဆွဲအား ကောင်းတာ၊ တခြား နာမည်ကြီး ဖုန်းအ...
Huawei Firmware တွေကို တစ်နေရာထဲမှာ စုစည်းပေးလိုက်ပါတယ်… လိုချင်သူတွေအနေနဲ့ယူသွားပါ… Download Link တွေကို တော့ Huawei ကနေ ပဲဒေါင်းနို...
သိတဲ.သူ ရှိသလို မသိတဲ. သူတွေ လဲ. ရှိနိူင် တဲ. အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ Android V4.0.3 သုံးသူများ အတွက် Setting ——-> More ———...
Harvest Moon Back to Nature For Android (PS1 Game တွေကို Android ပေါ်မှာဆော့ကြရအောင်)
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုံးက ဆော့ခဲ့ကြဖူးတဲ့ Play Station 1 Game လေးတွေကို လွမ်းကောင်းလွမ်းနေကြမှာပါ။ အဲဒါတွေထဲမှာ ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံးကတေ...
Huawei ဖုန်းများကို official တင်မယ်ဆိုရင် dload folder ကို sdcard ထဲထည့်ပြီး update လုပ်ရပါတယ်။ အခုပြောမယ့်နည်းကတော့ bootloader mod ခေါ်လ...
နောက်ဆုံးထွက် Zapya လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်….version 1.6 ပါ Zapya v1.6 ယူရန်….(Mediafire) Zapya v1.6 ယူရန်….(Zippy) Zapya v1.6 ယူရန်…...
ကြိုက်တဲ့သူငယ်ချင်းများယူသွားနိုင်ပါတယ် play.google မှာလည်း free ပေးပါတယ် Download>>> go4up (or) mediafire China Clone ဖုန်းတွေအတွက် One Click Root လေးပါ။
အခုနောက်ပိုင်း တရုတ်ဖုန်းတွေ အ၀င်များလာတာနဲ့အမျှ တစ်ချို့ တစ်ရုတ်ဖုန်းတွေမှာ Root လုပ်ရတာ ပြသနာရှိလာပါတယ် အခု တင်ပေးထားတာကတော့ Blink H...
Copyright © 2013 အောင်ဆုမွန် (မိုဘိုင်း)